iipleyini zemfazwe Russian uziphose intsimi Swedish ngaphandle kwemvume | Apg29
iipleyini zemfazwe Russian uziphose intsimi Swedish ngaphandle kwemvume
moya zomkhosi ezintathu Russian lathumela ngaphandle kwemvume ngexesha elifutshane kummandla Swedish ngoMgqibelo. A moya SIGINT, kunye iipleyini zemfazwe ezimbini yabhabha phezu Karlshamn.
Inqwelo-moya Russian lohlobo IL-20 wenza moya ngaphesheya koLwandle iBaltic kunye ezimbini nezinye karma moya lohlobo SU-27 emihlubulweni.
Siphila kwixesha kakhulu, ngoko sifanele ngakumbi kunanini na ngaphambili ahlale kuYesu. Kukho ubungozi ezininzi ezahlukeneyo nxamnye Sweden, zombini izisongelo ngaphakathi nangaphandle.
Ngaphezulu kunakuqala kufuneka ukuba ube ngokucacileyo ngakumbi ivangeli kaYesu Krestu. Kuyinto kuphela nguYesu ngubani unokugcina ukuhlangula abantu belizwe lethu.
Ezigciniweyo Wanihlangula ube xa wena ufumane uYesu njengeNkosi.